Qisadii Hajirah iyo Biyaha Zamzamka - Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay Q/2aad - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Qisadii Hajirah iyo Biyaha Zamzamka – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay Q/2aad
Sowmkan Allah ha inaga aqbalo…Aaamiin
Barmaamijkan waxa aan ku eagaynaa dhacdo wayn oo taariikhiya isla markaana ay muhiim tahay in ay ogaadaan dhamaanba dadka muslimiinta ahi. Waa qisadii xaaskii nabi Ibrahim (CSW) Hajira iyo sidii uu ilaahay ugu karaameeeyay in uu u dilaaciyay ceelka biyaha Zam Zamka. Mucjisadan ayaynu ku soo qaadi barmaamijka labaad ee barmaamijyo taxana ah oo aan ugu tala galay bisha Ramadaanta. Fadalan daawo, walaalaha kalena la sii wadaag.
Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay (2) – Qisadii Hajirah iyo ceelka Zamzamka